Anyị na -elekọta na Kildare - IntoKildare
Ahụike na nchekwa njem nlegharị anya kacha mma
N'ime netwọkụ Kildare emejupụtala atụmatụ mpaghara akpọrọ 'Anyị na -elekọta na Kildare'. Nkwa a anyị na -enye ndị ọbịa anyị ga -ahụ na emebere usoro ndị a iji chekwaa ahụike na nchekwa mmadụ niile.
N'ikwekọ na ntuziaka Fáilte Ireland nyere na June 8th 2020, Into Kildare Network emebela atụmatụ mpaghara akpọrọ 'Anyị na -elekọta na Kildare'. Ntinye aka ebe a maka ndị ọbịa anyị ga -ahụ na ihe ndị a dị maka ichekwa ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa na sta ?. Anyị na -edobe ụkpụrụ nchekwa kachasị elu ka anyị nwee ike na -atụ anya ịnabata ndị ọbịa anyị maka ahụmịhe na -atọ ụtọ n'oge adịghị anya!
Ibu ụzọ hazie nleta gị
Ozi onye ọbịa zuru ezu dị na intokildare.ie
Ibelata ike iji nye ohere ịdọpụ uche mmadụ.
Ntinye akwụkwọ n'ịntanetị tupu ị zere igwe mmadụ na kwụ n'ahịrị.
Oghere ndị akọwapụtara maka ndị ọbịa adịghị ike ebe enwere ike.
Mbipụta na-abụghị kọntaktị n'ụlọ ma ọ bụ tiketi mkpanaka maka ebe nkiri.
Ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ tupu oge eruo iji zere kwụ n'ahịrị.
Ebe ebe ndị ọbịa bịara ibelata.
Nọmba amachibidoro nwere usoro kwụ n'ahịrị.
Na -agba ume ma zụọ ndị ọrụ nnabata.
Ụlọ ọrụ nchacha aka.
Ụkpụrụ kachasị elu nke ahụike & nchekwa
Onye ahịa eburu ụzọ mee atụmatụ na-aga.
Kpochapụ ihe ngosi ndọpụ uche mmadụ.
Ọchịchị dị elu na -agbanwe agbanwe.
Nsacha aka ma ọ bụ ebe ịsa aka.
Mmekọrịta na-adịghị na kọntaktị na ndị ọrụ
Oghere na -eku ume ugboro ugboro.
Ndị tozuru oke & Ndị nwere ntụkwasị obi
Ndị nlekọta na -adọpụ uche mmadụ.
A zụrụ ya nke ọma na usoro nchekwa.
PPE maka ndị ọrụ niile.
Nyocha ahụike kwa ụbọchị.
Ahụmịhe Ndị Ahịa 5 Star
Ahụmịhe na -anabata, ịnabata na agaghị echefu echefu.
Ntụzịaka mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ebe dị anya na oche ndị dị n'èzí.
Usoro nchekwa nri kwesịrị ekwesị.
Kpọtụrụ ruo ihe na ịkwụ ụgwọ.
A na -eme nhicha na etiti oge niile.
Ịdebanye na atụmatụ 'Anyị na -eche na Kildare'
Ndị ọchụnta ego na-egosipụta akwụkwọ mmado Kildare Fáilte abịanyela aka na nkwupụta nke onwe ha na ha na-agbaso isi ihe niile ma ọ bụrụ na ọ dabara na azụmaahịa ha ma na-agbaso ntuziaka gọọmentị. Mgbe emechara nkwupụta dị n'okpuru, azụmaahịa na -esonye ga -enweta akwụkwọ mmado na baajị 'Anyị na -elekọta na Kildare' iji gosipụta na ụlọ ha, yana kwa akwụkwọ mmado na baajị dijitalụ.